विजनेश – Page2– सप्तरंगी एफ एम
Home / विजनेश (page 2)
झापाको कचनकवल ६ स्थित बनियानी बजार व्यवस्थित बनाउन केन्द्र सरकारबाट १ करोड रुपैयाँ बिनियोजन
सप्तरङ्गी एफ.एम. दमक/पुष २/ झापाको कचनकवल गाउँपालीका वडा नम्बर ६ स्थित बनियानी बजार व्यवस्थीत हुने भएको छ । तराई मधेस सम्मृद्धि कार्यक्रम अन्तर्गत मन्त्रालयबाट रकम उपलब्ध हुने भएपछि बजार व्यवस्थीत गरिने भएको हो । संघिय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट बनियानी बजारलाई व्यवस्थीत बनाउन १ करोड रुपैयाँ बिनियोजन भएको झापा क्षेत्र नम्बर ३ का प्रदेशसभा सदस्य बसन्त बानियाँले जानकारी दिनुभयो ...
दमकमा ग्रिन हाउस एण्ड फेमिलि रेष्टुरेन्ट सञ्चालनमा
सप्तरङ्गी एफ.एम. दमक/मंशिर २६/ दमकमा आज देखी ग्रिन हाउस एण्ड फेमिलि रेष्टुरेन्ट सञ्चालनमा आएको छ । दमक वडानम्बर ८ स्थित पश्चि बस स्टेन्ड पुर्व पट्टि मुख्य राजमार्ग देखी दक्षिण पट्टिको भवनमा रेष्टुरेन्ट सञ्चालन सुरु गरिएको हो । आज एक औपचारिक कार्यक्रमका विच रेष्टुरेन्टको सुभारम्भ गरिएको हो । भेज तथा नन् भेज आईटमका नान तन्दुर, रोष्ट सहितका स्वस्थवर्धक खानाको परिकारका साथै ...
सप्तरङ्गी एफ.एम. दमक/मंशिर २५/ एसिएन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनिले मोरंगको पथरीमा उप–शाखा सञ्चालन सुरु गरेको छ । हिँजो एक कार्यक्रमका बिच पथरी सनिश्चरे नगरपालिका का प्रमुख दिलिप कुमार राइले सो उप–शाखा कार्यलय को उद्घाटन गर्नु भएको हो । एसियन लाईफ ईन्स्योरेन्सका पथरी उप–शाखा प्रमुख रमेश प्रधानको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रम प्रमुख अतिथी राइ ले इन्स्योरेन्सको उप–शाखा पथरीमा सञ्चालन हुनु नगरबासीको लागी खुसीको ...
सप्तरङ्गी एफ.एम. दमक/मंशिर १६/ माघ १ गतेदेखि झापालाई मदिरा नियन्त्रित बनाउने कार्ययोजनालाई प्रभावकारी बनाउन मदिरा व्यवसायीहरु आफैं लागेका छन् । स्थानीय स्तरमा समेत मदिरा व्यवस्थित बनाउने सरकारी कार्यक्रमलाई शसक्त कार्यान्वयन गराउन माइपश्चिमका मदिरा व्यवसायीहरु समेत आफै अग्रसर भएका हुन् । मेची मदिरा व्यवसायी संघ माइपश्चिम क्षेत्रीय समितिका अनुसार मदिरा व्यवस्थित गराउन माइपश्चिमका पाँचैवटा स्थानीय तहमा त्यससम्बन्धी जनचेतनासहित छलफल शुरु गरिने ...
सप्तरङ्गी एफ.एम. दमक/मंशिर १२/ झापा उद्योग वाणिज्य संघ गौरीगञ्जको भवन शिलान्यास गरिएको छ । गौरीगञ्ज गाउँपालिकाका अध्यक्ष बाबुराजा श्रेष्ठले आज एक कार्यक्रमका बीच संघको भवन शिलान्यास गर्नुभयो । युवा व्यवसायी केशव कुमार अग्रवालले भवन निर्माणका लागि संघलाई गौरीगज– ३ मा १ कठ्ठा जग्गा दान दिनुभएको छ । गाउँपालिकाकाले भवन निर्माणका लागि बिनीयोजन गरेको १० लाख रुपैयाबाट भवन निर्माण शुरु गरिएको ...
सप्तरङ्गी एफ.एम. दमक/मंशिर ११/ नेपाल पुस्तक तथा स्टेशनरी व्यवसायी संघ झापाको नयाँ नेतृत्व चयन भएको छ । आज कन्काई नगरपालिकामा सम्पन्न चौथो जिल्ला अधिबेशनले देशबन्धु ढुंगेलको अध्यक्षतामा १५ सदस्यीय जिल्ला कार्यसमिति चयन गरेको छ । गठित जिल्ला समितिको उपाध्यक्ष भगिरथ राई (जिवन), सचिवमा युवराज विवस, सहसचिवमा सुमन खनाल र कोषाध्यक्षमा गोपाल बुढाथोकी चुनिएका छन् । समितिको सदस्यहरुमा खगेन्द्र सुवेदी, रविन ...
सप्तरङ्गी एफ.एम. दमक/मंशिर ११/ गरिमा बिकाश बैंकका दमक शाखा कार्यालयको आज सुभारम्भ गरिएको छ । दमक नगरपालीकाका प्रमुख रोमनाथ ओलीले आज बिहान एक कार्यक्रमका विच बैंकको ५८ शाखाको रुपमा दमक शाखाको सुभारम्भ गर्नु भयो । १२ बर्ष अघि तिन जिल्लालाई कर्यक्षेत्र बनाएर स्थापना भएको बैंकले हाल मुलुक भरी कार्यक्षेत्र बनाउँदै बिभिन्न जिल्लाहरुमा शाखा सञ्चालन गरिरहेको छ । दमक शाखा सुभारम्भको ...